प्याँनक्रियाजको समस्या भएका बिरामीका लागि इआरसिपी प्रविधि प्रभावकारी « Nepal Health News
२०७६, १७ श्रावण शुक्रबार १०:५० मा प्रकाशित
डा.कमल राज सुवेदी/ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन तथा ग्यास्ट्रोइन्ट्रेरोलोजिस्ट
हामीले कतिपय व्यक्तिलाई जन्डिस भएको देखेका छौं । वास्तवमा जण्डिस कस्तो अवस्थामा देखिन्छ ? र यसको समाधानका उपायहरु के के हुनसक्छन् ? भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ । कलेजोले पित्तरस बनाउँछ । यसले खाना पचाउन मद्धत गर्छ । यो पित्तनलीको माध्यमबाट सानो आन्द्रामा जाने गर्छ । पित्त नलिमा अवरोध आउनु जन्डिसको प्रमुख कारण हो ।
पित्तनलीमा ढुङ्गा बन्ने एवं पित्तथैलीको ढुङ्गा नलीमा जाने (वाइल डक्ट स्टोन) र पित्तनली साँघुरिने एवं च्यापिने (स्ट्रिक्चर) समस्याले धेरैजसो व्यक्तिलाई जन्डिस हुने गरेको पाइन्छ ।
माथिल्लो पेट दुख्ने, आँखा वा शरिर पहेँलो हुने, पिसाव गाढा पहेँलो देखिने, पित्तनली साँघुरिएर जन्डिस बढ्ने, जिउ चिलाउनेलगायतका समस्या जन्डिसका लक्षण हुन् ।
के कारणले पित्तनली साँघुरिन्छ ?
पित्त नली सुन्निने, पित्तनलीको क्यान्सर (कोलेन्जियो कार्सिनोमा), पित्तथैलीमा जमेको ठूलो ढुङ्गा, पित्तथैलीको क्यान्सर, प्याँनक्रियाज क्यान्सर एवं पित्तनलीको मुखको अम्पुला क्यान्सर हुँदा पनि यस्ता लक्षणहरु देखिन सक्छन् । यस्ता समस्याहरु देखिएमा चित्सिकको सल्लाहमा तुरुन्त अपरेशन गर्नुपर्छ । अप्पुला क्यान्सरका लागि इन्डोस्कोपिक रेट्रोग्रेट कोलांगो प्याँक्रियाटोग्राम (इआरसिपी) प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ ।
विगतमा इन्डोस्कोपिक रेट्रोग्रेट कोलांगो प्याँक्रियाटोग्राम (इआरसिपी) प्रविधिको प्रयोग पित्तनली र प्याँनक्रियाज नलीका रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्थ्यो । तर अहिले सोही अंगहरुको उपचारका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ । मुखबाट इन्डोस्कोपी मेसिन छिराएर पेटको बाटो हुँदै आन्द्रामा रहेका पित्तनलीको मुख (अम्पुला) मा पुग्छ । विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गरेर नलीको मुखलाई ठूलो बनाइन्छ र पित्तनलीको ढुङ्गा निकालिन्छ ।
नली साँघुरो भएको भागको माथि स्टेन्ट (पाईप) राखिन्छ । यसले पित्तरसको बहाव सुचारु गराउँछ । यसले जन्डिस र दःुखाई कम हुन्छ । पित्तनलीको ढुङ्गा ठूलो भएमा त्यसलाई नली भित्रै फुटाएर वा नलीको तल्लो भागलाई तन्काएर ठूलो बनाएर निकाल्न सकिन्छ । प्याँनक्रियाजको समस्या भएका बिरामीका लागि पनि इआरसिपी प्रविधि प्रभावकारी मानिन्छ । यस्ता समस्या भएका बिरामीको माथिल्लो पेट दुख्ने र खाना नपच्ने समस्या हुन्छ । प्यानक्रियाज नलीमा ढुङ्गा बन्ने र नली साँघुरिने भएकाले ढुङ्गा निकालेर स्टेन्ट राख्नुपर्छ ।
यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा पेट चिर्नु वा पेटमा प्वाल पार्नुपर्दैन । विरामीलाई एनेस्थेसिया दिएर बेहोस बनाएर उपचार गरिन्छ । इआरसिपी गरिसकेपछि केहि घण्टा अवलोकनमा राखेर सोहि दिन घर फर्काउन सकिन्छ ।
(कन्सल्टेन्ट, फिजिसियन तथा ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट डा.कमल राज सुवेदी ह्याम्स हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
माछाबाट टोकाएर गरिने थेरापीलाई ‘फिस थेरापी’ भनिन्छ। यस किसिमको प्राकृतिक थेरापीलाई ‘इथियो थेरापी’ का नामले
कोरोना संक्रमणबारे भ्रम निवारण
१. कसैलाई रुघाखोकी लाग्दैमा उसलाई कोरोना संक्रमण भएको हुँदैन | २. कोरोना संक्रमण नयाँ रोग